Kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekile? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ulahlekile
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekile?
4 Umntu ongaziwayo ulahlekile
5 Abanye baphulukana nezihlobo zabo
6 Ulahlekile ehlathini
7 Ulahlekile elwandle okanye emlanjeni
8 Ngubani olahlekileyo esixekweni
9 Phulukana nento
10 Ngaba ngumlingo ombi?
Ukuphupha ulahlekile kuhlala kusisiva sokulahlwa kwaye ngaphandle kolwalathiso. Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba imeko oyidelelayo ikubangela iingxaki. Ezinye iimvakalelo eziqhelekileyo kubo bonke abantu zifuna ukuba ulumkele ukunqanda okubi kakhulu.
Konke kuxhomekeke kwizinto ezininzi, kodwa eyona nto iphambili yenzekayo ngaphakathi kwenyani obuyiphupha. Ukuphupha ulahlekile kunokuba neentsingiselo ezininzi kwaye akufuneki ubambelele kuzo zonke. Utshintsho lukhona kwaye akukho maphupha mabini aya kuze abe nentsingiselo efanayo, esi sithuba siza kukubonisa konke oku.
Ukuba uphuphe elo phupha ngumqondiso wokuba khange usebenze ngendlela ebekufanele ukuba uzisombulule iingxaki zakho. Kuqhelekile ukuba neemvakalelo ezithile, kodwa kunokubonisa imeko yokuxinana ngokweemvakalelo. Kuya kufuneka usebenze nzima ukuthintela yonke le meko ukuba ingakwenzakalisi.
Ukuphupha ulahlekile kungaphezulu kwesicelo somphefumlo wakho sokuba ujonge ngaphakathi kuwe. Akunyanzelekanga ukuba unakekele inkangeleko yakho kuphela, kuba icala lokomoya nalo lifuna ukuqwalaselwa. Namhlanje uya kuba sethubeni lokwazi iintsingiselo ezinokubakho kwabo sele benalo eli phupha.
Iingxaki zakho bekunzima kakhulu ukuzisombulula, ke yongamela imvakalelo yokuba wedwa kuyo yonke into. Eli phupha libonisa ukuba kuyakufuneka ugcine intloko yakho ikwazile ukusombulula le micimbi. Iinjongo kunye neenjongo ozibekileyo zinokufezekiseka, ke zama ukujonga kancinci entliziyweni yakho.
Zama ukuba nokuzithiba ngakumbi ukuze ungasokoli kwiimeko ezahlukeneyo ezizayo. Eli lixesha lokusondela kusapho lwakho, kubahlobo, kwaye wabelane nokwesaba kwakho nabo bonke.
Umntu ongaziwayo ulahlekile
Ukuba uphuphe lo ngumqondiso wokuba umntu othile uzama ukusondela kuwe ukuba abe ngumhlobo wakho. Ukuphupha ulahlekile kuloo mntu ngumntu wasemzini luphawu lokuba kufuneka wamkele ubuhlobo obutsha, kuba ngexesha elifutshane uza kufumana umntu omthembileyo.
Abanye baphulukana nezihlobo zabo
Kuqhelekile ukuba abantu bayeke ukuthathela ingqalelo into efanelekileyo kwaye oku kwenzeka ngenxa yezizathu ezininzi. Lo mntu ulahlekileyo ephupheni lakhe ufuna uncedo lwakho nokunye okuninzi kubuhlobo bakho. Zama ukuba uqaphele ukuba akunakuze kube kakhulu ukunceda umntu omqhelileyo, kuba ngomso unganguye oyifunayo.
Namhlanje abantu baphila kwixesha "lokuba", oko kukuthi, kufuneka uthenge ukuze wamkelwe ngumntu wonke. Ukuba unakho ukunikela ngento encinci onayo, unokunceda abantu abaninzi.
Ihlathi libonisa ukuba uneemvakalelo ngaphakathi kuwe kwaye kufuneka uzame ukuzilawula okanye uzazi kancinci. Ukuphupha ulahlekile ehlathini luphawu oluqinileyo lokuba kufuneka usebenze kulwazi lwakho. Funa ukuzazi ngcono kwaye ngaphezu kwako konke zama ukusombulula iimbambano onazo ngaphakathi.
Ulahlekile elwandle okanye emlanjeni
Ukuba uphuphe lo ngumqondiso wokuba kufuneka ujonge ngaphakathi kuwe kwaye usebenze ukuze ube ngumntu ongcono. Nangona ukukhala kusenokubonakala ngathi kubuthathaka, kusoloko kubhetele kunokuzibamba. Lo mzuzu ubuza ukuba unakho ukunika ukuhamba okungakumbi kwiimvakalelo zakho.
Nokuba umntu unzima kangakanani, kubalulekile ukuba iimvakalelo zicinyiwe. Akukho mntu uzalelwe ekubeni nentliziyo elukhuni kwaye abambe imeko enzima, kuba yenza umonakalo omkhulu ekuhambeni kwexesha.
Ngubani olahlekileyo esixekweni
Isixeko lithuba elihle lokusebenzisa amathuba amaninzi anokubonelelwa yindawo nganye. Ukuba uphuphe eli phupha, libonisa kakuhle amathuba aya kuvela ebomini bakho. Ngethuba elifutshane kunokwenzeka ukuba uya kuba nayo yonke imiqathango yokufika apho ufuna khona.
Kuxhomekeke kwinto oyiphosileyo, luphawu lokuba ufuna ingqalelo engakumbi ngandlela zonke. Into eyenzekileyo ephupheni ayizukuhlala iqinisekiswa ebomini bakho, kuba kunokwenzeka ukuba ayizukwenzeka. Zama ukuqonda ukuba yintoni elahlekileyo kwaye iya kuba lixesha lokusebenzela ukuyisombulula.
Ngaba ngumlingo ombi?
Ukuphupha ukuba ulahlekile lilizwi elihle kubomi bakho kwaye kubalulekile ukuba ufunde ukujonga ngakumbi ngaphakathi kwakho. Uzama ukubona izinto ezingenakubonwa ngabantu, oko kukuthi, oku kulandelayo xa lilonke. Nceda abanye, kodwa qala uzincede ukuze ufezekise iinjongo zakho.